सेयर बजारमा कसरी सफल हुने ? चार्ली मङ्गरको यस्तो छ लगानीकर्तालाई सुझाव
काठमाडौं : चार्ली मङ्गर (चाल्स थोमस मङ्गर) लाई वारेन बफेटको दायाँ हातको रुपमा पनि चिनिन्छ । वारेन बफेटको बर्कसायर हाथवेका उपाध्यक्ष रहेका मङ्गरलाई बफेट आफ्नो पाटर्नर बताउँछन् । चार्ली मङ्गरको जन्म १९२४ को जनवरी १ मा भएको थियो । युवा अवस्थामा उनले वारेन बफेटका हजुरबुवाको खाद्यान्य पसलमा काम गरेका थिए । उनी १९ वर्षको उमेरमै आर्मीमा भर्ती भए । आर्मी छोडेपछि उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा कानुन विषय बढ्न थाले ।
कानुनकर्मी रहँदै उनले लगानीको क्षेत्रमा पनि काम गर्न थाले । सुरुमा घरजग्गा कारोबारी हुँदै पछि लगानी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि छिरेका हुन् उनी । मङ्गरले ज्याक विलरसँग साझेदारी गरी विलर, मङ्गर एन्ड कम्पनी नामक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोले । यो कम्पनीबाट सन् १९७३ मा ३२% र १९७४ मा ३१% घाटा खाएपछि १९७६ मा कम्पनी बन्द गर्नुपरेको थियो ।
चार्ली मङ्गरको सफलता वारेन बफेटसँग जोडिएको भन्ने गरिन्छ । तर बफेटसँग पाटर्नरसीप गर्नुभन्दा पहिले पनि उनले लगानी गरेका थिए । जसबाट वार्षिक औसत १९.८% प्रतिफल प्राप्त भएको थियो । मङ्गर सन १९८४ देखि २०११ सम्म वेस्को फाइनान्सीयल कर्पोरेसनका अध्यक्ष पनि भए । स्टील, इन्सुरेन्स तथा कर्जा लगानीसँग सम्बन्धित यो कम्पनी अहिले वारेन बफेटको बर्कसायर हाथवेको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी भएको छ ।
चार्लीको लगानी सिद्धान्त
चार्ली र वारेन बफेट दुवै भ्यालु इन्भेष्टरका रुपमा पनि चिनिन्छन् । तर चार्लीको भने लगानी गर्ने तरिका केही फरक रहेको छ । दुवै एउटै कम्पनीको पाटर्नर भएपनि लगानी गर्ने शैली भिन्न छ ।
चार्लीले लगानी गर्नुपूर्व जोखिमको उचित लेखाजोखा गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि लगानीमा जोखिम कति छ र जोखिम मोले बापत आउने फाइदा कति हुन्छ भन्ने मापन गर्न आवश्यक हुने उनको मान्यता छ । सुरक्षको उचित मार्जिन (मार्जिन अफ सेफ्टी) राख्नुपर्ने हुन्छ । योसँगै मूल्य वृद्धि र ब्याजदरमा हुने परिवर्तनलाई ख्याल राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्ततः आफूले लेखाजोखा गरेको जोखिमलाई भर्पाई गर्न हरदम लागिरहनुपर्नेमा मङ्गरले जोड दिएका छन् ।
यहाँ मङ्गरले विचार र निर्णयको स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेका छन् । विभिन्न मानिसको व्यक्तिगत विचारदेखि सञ्चार माध्यममा आएका खबरहरुले पनि लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । तर यस्ता विचार र खबरहरुबाट प्रभावित हुनुहुँदैन ।
अर्थात आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ । चार्लीले वास्तविक, वस्तुपरक र विवेकपूर्ण निर्णय लिन जोड दिएका छन् । लगानी गर्दा आफ्नो विचार र निर्णयसँग अरु सहमत छन् कि छैनन् भन्ने विषयले कुनै महत्व राख्दैन । र, अरुको देखासिखी गर्दा आफैलाई नोक्सान पुर्याउँछ । त्यसैले, हरेक लगानीकर्ताले स्वविवेकी निर्णय लिनैपर्ने हुन्छ, उनी भन्छन् ।
अध्ययन र तयारी
चार्ली आफै एक गहन अध्ययनकर्ता हुन् । र, उनी हरेक विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् । चार्लीका अनुसार कुनै एक क्षेत्रको मात्र अध्ययन गर्नुभन्दा पनि हरेक क्षेत्रको हरेक विषयमा अध्ययन गनुपर्छ । आखिर लगानी कुनै एक विशिष्टीकृत क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुन सक्छ । र, आफूलाई स्मार्ट लगानीकर्ता बनाउने हो भने हरेक विषयमा किन ? भन्ने प्रश्न गर्नु आवश्यक छ । अध्ययनले नै लगानीको लागि उचित तयारी गराउने र विभिन्न क्षेत्रमा ज्ञान हुँदा चुनौती सामना गर्न झन् सजिलो हुने उनी बताउँछन् ।
धेरै जसो लगानी नोक्सानीमा जानुको प्रमुख कारण विश्लेषण नै नगरी हतारमा निर्णय लिनु रहेको देखिन्छ । चार्ली बजारको होइन व्यापारको विश्लेषक बन्न सुझाउँछन् । अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्नु पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ । जोखिम र फाइदालाई पनि उचित विश्लेशण गर्न सक्नुपर्छ । अघि बढ्नका लागि कहिलेकाँही पछाडि पनि फर्कनुपर्ने उनको भनाई छ । अनि, विश्लेषण गर्नुको तात्पर्य यो पनि हो । सोच र विश्लेषणलाई समय नदिंदा धेरै लगानी डुब्ने सम्भावना उत्तिकै हुन सक्छ ।
पुँजीको उचित वितरण वा विनियोजन
आपूmसँग भएको पुँजीलाई उचित परिचालन र वितरण गर्नु लगानीकर्ताको पहिलो काम हुने चार्ली भन्छन् । एउटै लगानीसँग प्रेममा फस्नु नहुने उनको धारणा छ । यो किन भने लगानीकर्ता जहिले पनि समय, काल, परिस्थिति र अवसर अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । एउटै लगानीलाई सधैंभर प्रेम गरेर बस्यो भने अर्को त्यो भन्दा महत्वपूर्ण मौका गुम्न सक्नेतर्फ समेत सचेत हुन आवश्यक छ ।
समय, परिस्थिति र अवसरलाई पहिचान गर्न जति जरुरी छ, त्यति नै जरुरी धैर्य हुन पनि छ । गलत निर्णयको सिकार कतिपय अवस्थामा धैर्यता नअपनाउँदा नै हुने गर्छ । हतारमा कारोबार र लगानी गर्दा आर्थिक भार थपिनेतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहने चर्ली बताउँछन् ।